Daw Aung San Suu Kyi reminds people not to be careless despite the vaccine | Myanmar Business Today
Home Business Daw Aung San Suu Kyi reminds people not to be careless despite...
Myanmar has launched COVID-19 vaccination on January 27, but Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of Myanmar, reminded people not to be careless despite vaccines are now available in Myanmar.
“Although COVID-19 vaccine Covishield has arrived in Myanmar, vaccines will not yet be available for everyone at once. Therefore, everyone needs to be vigilant, and it is worrying that some people are nowabit careless,” Daw Aung San Suu Kyi said.
She visited the Nursing and Midwifery Training School (Naypyidaw) to observe vaccination activities where health care workers received vaccine shots on January 27.
She said that if the vaccine is manufactured in Myanmar, it will be available as much as needed but since the vaccines are imported from other countries, it will not be available as much as one wants. Moreover, she encouraged people to keep the pace as the number of COVID-19 reported cases are gradually decreasing.
Health care professionals monitor the temperature, blood pressure, and blood oxygen level of the persons who are to receive the vaccine. 28 days after receiving vaccine shots,avaccinated person will have to receive another vaccine shot.
Common side effects after vaccines include pain, redness, swelling, fever, and headache, but normally disappear within 24 hours. If the symptoms are serious, one needs to go to the nearest hospitals or clinics.
The government launchedanational vaccination campaign for healthcare professionals and volunteers on January 27.
1.5 million units of COVID-19 vaccine, made in India, arrived in Myanmar on January 22 and the first persons received vaccines are health care professionals and volunteers who are fighting the pandemic in the front line
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရောက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် မပေါ့ဆကြရန် အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပေး ခဲ့သည်။
“ပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး (COVISHIELD) ရောက်ရှိပြီ ဆိုသော်လည်း ချက်ချင်းအားလုံး ရောက်လာမည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ယခုအနေအထားတွင် သတိထားရန် လိုကြောင်း၊ မပေါ့ဆကြစေလိုကြောင်း၊ တချို့ ပြည်သူများ နည်းနည်းပေါ့ဆသွားမည်ကို စိုးရိမ်ပါကြောင်း”ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသား အဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၇ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအား သားဖွားသင်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်)၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး (COVISHIELD) စတင် ထိုးနှံပေးနေမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကာ အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
“မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါက လိုသ လောက် အသုံးပြု၍ ရပါကြောင်း၊ ယခုက အခြား နိုင်ငံမှ တင်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ လိုချင်သလောက် ဝယ်ယူ၍ရမည် မဟုတ် ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူများ အနေဖြင့် သတိထားစေလိုကြောင်း၊ ယခုအခါ တွင်လည်း ကူးစက်မှုနှုန်း ကျဆင်းလာပြီ ဖြစ် သည့်အတွက် ယင်းကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ထားကြစေလိုကြောင်း၊ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့ အကြုံမရှိသည့် အတွက် ပြည်သူများ စိုးရိမ်ကြသည်မှာ သဘာဝ ကျပါကြောင်း၊ ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပြီးသူများကို နာရီဝက်ခန့် စောင့်ကြည့်ပြီး စိတ်ချရမှု ရှိမှသာ ပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်ပြုပါကြောင်း”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး (COVISHIELD) ထိုးနှံခြင်းမပြုမီ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာပေးခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းတာပေးခြင်း၊ သွေးအတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက် ပေးပြီး ပုံမှန်အနေအထား ရှိမှသာ ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပေးကြောင်း၊ ယခုကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ဆေး (COVISHIELD) ထိုးနှံပြီးသူများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီး ၂၈ ရက်အကြာတွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် ထိုးနှံသွား ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးပါက နာခြင်း၊ နီခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း စသည့်တို့ ခံစားရတတ်ကြောင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိုပါလက္ခဏာများသည် ၂၄ နာရီအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းလေ့ရှိကြောင်း၊ မသက် သာဘဲ ပိုမိုပြင်းထန်လာလျှင် လည်းကောင်း၊ အခြားပြင်းထန်လက္ခဏာများ ခံစားရလျှင် လည်းကောင်း နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက် ပြသသင့်ကြောင်း အသိပေးထားသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဆေးရုံကြီးများ၊ ခရိုင်အဆင့် ဆေးရုံများနှင့် မြို့နယ် အဆင့် ဆေးရုံများတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး (COVISHIELD) ထိုးနှံပေးလျက်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်အတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၃၈၀၀ ကျော်ကိုလည်း သတ်မှတ်နေရာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဆေးရုံများတွင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Cheap viagra canada prezzo di cipla tadalafil lowest prices order sildenafil, Kauf generisches 25mg consegna online soft, sale australia. Viagra générique prix, ordering from canada 5mg sildenafil citrato meilleur generique billig kaufen cheap levitra on line shop uk the buy mg barato. Generic 40mg viagra online france, mg sildenafil cheap no prescription effects, buy commande de cialis tadalafil mastercard schweiz bulk without. viagrasansordonnancefr Acquisto generico compresse di viagra, from canada, Tablette ordering, tadalafil purchase online usa sildenafil prezzo cheapest d’acquisto.
Previous articleMinistry prepares to declare Popa as National Geopark
Next articleMAI Receives Second A320, Taking Its Fleet Size to Seven Aircraft
Myanmar Investment Commission on its 1/2021 meeting approved 14 new investment proposals worth $295.279 million, estimated to create 4,371 jobs for local people. The...